हामीले कहिले चन्द्रमा, सूर्य र पृथ्वीलाई अक्षरमा लेख्नु पर्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
कहिलेकाँही हामी यस बारेमा लेखिरहेका छौं सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा, र सन्दर्भमा निर्भर गर्दै जुन हामी यो गर्दैछौं, हामीले ठूला अक्षरहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ कि छैन। यस्तो समय हुन्छ जब शिक्षकहरूले गलत हिज्जे लिने विचार गर्छन् र अन्यले गर्दैन।
यी तत्वहरूलाई जनाउन हामीले कहिले राजधानी अक्षर प्रयोग गर्नुपर्छ र किन?
1 सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा
2 अन्य गैर खगोलीय सन्दर्भहरू
सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा
खगोल सम्बन्धी सन्दर्भमा, चन्द्रमा सूर्य वा पृथ्वी जस्तै पूंजीकृत हुनु पर्छ, किनकि हामी यी तत्वहरूलाई सम्बन्धित वस्तुहरूको डिजाईनिभ नामको रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं। जे होस्, हामी यी तत्वहरूलाई लोअरकेसमा लेख्छौं, जब हामी आफैले ताराहरूमा उल्लेख गर्छौं वा व्युत्पन्न वा मेटाबोरिकल प्रयोगहरू।
त्यहाँ त्यस्ता प्रस it्गहरू छन् जुन उनीहरूलाई पूंजीकृत गर्न आवश्यक छैन। उदाहरणको लागि, "म समुद्र किनारमा घाम घाँसे जाँदैछु" भन्ने वाक्यांशमा "सूर्य" भन्ने शब्दलाई क्यापिटल बनाउनु आवश्यक हुदैन किनकि हामीले सूर्यलाई डिजाईनिभ नामको रूपमा हेरिरहेका छैनौं। यद्यपि "ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुम्दछन्" भन्ने वाक्यांशमा यसलाई पूँजीकरण गर्नु आवश्यक छ किनकि हामी सूर्यलाई नामको रूपमा हेर्दछौं।
अन्य गैर खगोलीय सन्दर्भहरू
यी खगोलीय सन्दर्भहरूको बाहेक, दुबै सीधा प्रयोगमा र व्युत्पन्न वा मेटाफोरिकलहरूमा, तिनीहरू सबै सामान्य मा सानो शुरूवाती संग लेखिएको छ। यो सिफारिश विशेष गरी अभिव्यक्तिको लागि लागू हुन्छ घामको किरण, सूर्य उदय, एक सूर्य, पूर्णिमा, नयाँ चन्द्रमा, चाँदनी, हनीमून, चंद्रको लागि सोध्नुहोस्, पृथ्वीको उजाड र अन्य समानहरू, जहाँ कुनै हाइलाइटि such जस्तै उद्धरण वा इटालिकहरू आवश्यक छैन। ग्राउन्ड सँधै लोअरकेसमा लेखिएको हुन्छ जब यसले भूमिलाई जनाउँछ: "प्लेनले अवतरण गर्न सक्दछ।"
निष्कर्षमा हामी यो भन्न सक्दछौं कि खगोलशास्त्रीय हिसाबले सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा ठूला भएका छन् किनकि यो उनीहरूको नाम जस्तै हो। यो सानो अक्षरमा तपाईंको आफ्नै नाम राख्नु जस्तै हो। यस तरिकाले, हामी उनीहरूलाई लेख्दा फेरि गल्ती गर्दैनौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » हामीले कहिले चंद्र, सूर्य र पृथ्वीलाई अक्षरमा लेख्नु पर्छ?
सोमालियाले खडेरीको कारण राष्ट्रिय आपतको राज्य घोषणा गर्‍यो